Tokyo dia nanambara ny toe-javatra misy ny vonjy taitra taorian'ny fisian'ny tranga COVID-19 vaovao
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Japon » Tokyo dia nanambara ny toe-javatra misy ny vonjy taitra taorian'ny fisian'ny tranga COVID-19 vaovao
Janoary 7, 2021
Ny praiminisitra Josh Yoshihide Suga
Voalaza fa misy ny vonjy taitra any amin'ny faritr'i Tokyo satria misy tranga COVID-19 vaovao miteraka tahotra sao ho tototry ny hopitaly Japon
Ny faritra lehibe kokoa ao Tokyo dia nitatitra aretina 2,447 19 vaovao COVID-1,591 androany, izay nihoatra ny 7,000 ny alarobia, raha nitatitra kosa ny fampahalalam-baovao Japoney fa voaisa XNUMX mahery ny tranga manerana ny firenena manerana ny firenena.
Ny fiakaran'ny tsimok'aretina COVID-19 dia nanosika ny manampahefana japoney hanambara fa misy fepetra vonjy maika any amin'ny faritry Tokyo.
Ny praiminisitra Josh, Yoshihide Suga, izay nanao ny fanambarana ny amin'ny fanjakana vonjy taitra, dia voatsindry mafy avy amin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny fahasalamany handray andraikitra, satria miady amin'ny onja C fahatelo ny firenenaOVID-19 ny aretina dia lehibe kokoa noho ireo hita taloha tamin'ny areti-mifindra coronavirus.
"Nanjary nanahirana ny firenena ny toe-draharaha ary manana krizy mahery vaika izahay," hoy i Suga raha nanambara ny fameperana vaovao, izay manan-kery ny zoma. “Matahotra izahay fa ny fielezan'ny virus coronavirus manerana ny firenena dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fiainan'ny olona sy amin'ny toekarena.”
Tokyo dia nitatitra aretina 2,447 tamin'ny alakamisy lasa teo, tafakatra 1,591 7,000 ny alarobia, raha ny tatitra nataon'ny media dia nilaza fa nisy XNUMX mahery ny firenena, avo indrindra koa.
“Isan'andro dia mahita aretina isan-karazany isika. Manana krizy tena matotra tokoa izahay, ”hoy i Yasutoshi Nishimura, minisitra tompon'andraikitra amin'ny valinteny areti-mandringana any Japon.
Ireo fepetra, izay hapetraka mandritra ny iray volana - fa mety lava kokoa - dia ho hentitra kokoa noho ny fanidiana mihatra any amin'ny firenen-kafa, ary tsy toy ny nandritra ny vonjy taitra voalohany tany Japon tamin'ny lohataona, ny sekoly sy ny orinasa tsy ilaina dia tsy angatahina. akaiky.
Gym, fivarotana lehibe ary toeram-pialamboly dia asaina hanafohezana ny ora fisokafany.
Trano fisotroana bar sy trano fisakafoanana 150,000 any Tokyo sy ireo prefektioran'i Kanagawa, Chiba ary Saitama manodidina azy telo hetsy - izay miaraka amin'ny 30% -n'ny mponina 126 tapitrisa ao amin'ny firenena - no angatahina hitsahatra amin'ny alikaola amin'ny 7 hariva ary hanidy adiny iray taty aoriana . Hamporisihina ny olona hisoroka ny fitsangantsanganana tsy ilaina aorian'ny 8 alina.
Angatahina ireo orinasa hanatsara ny famatsiana miasa lavitra miaraka amin'ny tanjona hampihena ny fifamoivoizana ho 70%.
IATA: Mangataka ny hijanonan'ny mpandeha
Miomana amin'ny fatiantoka 1.4 miliara dolara i Aostralia noho ny fahaketrahan'ny fizahan-tany sinoa